Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ọhụrụ si Miami gaa Chetumal na ụgbọ elu America
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ụgbọ elu Amerịka wepụtara njem ya nke iri abụọ na asatọ na Mexico n'oge na-adịbeghị anya site na mmalite ya Miami (MIA) gaa n'ụzọ Chetumal (CTM), na-aga n'ihu na atụmatụ mgbasawanye Mexico ya maka 2021.
Nsoro Frequency Time Aircraft
MIA-CTM Wednesday na Saturday 10: 50 am Embra 175
CTM-MIA Wednesday na Saturday 1: 50 pm Embra 175
"American nwere nkwa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 80 nke ọrụ na Mexico, anyị nwekwara obi ụtọ imechi ụgbọ elu mbụ nke 2021 a. Miami na Chetumal," José Maria Giraldo, onye isi ọrụ maka Mexico, Central America, Colombia na Ecuador kwuru. American ụgbọ elu. "Anyị nwere obi ụtọ inwe ike imeghe ụzọ Chetumal nye ndị njem si United States na Ụwa."
Ememe mmeghe ahụ bụ Gọvanọ nke steeti Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquin Gonzalez, kwuru, sị, "Ụgbọ elu ụgbọ elu a na-asụ ụzọ na isi obodo steeti ahụ ga-abara mpaghara ndịda niile uru ma gbasaa onyinye njem nlegharị anya ya, na-enye aka n'ebumnobi anyị nke iwusi obodo ahụ ike. akụ na ụba na mmepe nke mpaghara a."
Dario Flota Ocampo, onye isi ụlọ ọrụ Quintana Roo Tourism Board, kwuru na "anyị na-enwe ekele maka mmasị nke ụgbọ elu America na-egosi mgbe niile ịkwado ebe ndị njem nlegharị anya nke Caribbean Caribbean, anyị nwere olileanya na ụzọ a ga-enyere aka ịmepụta okporo ụzọ n'akụkụ abụọ ahụ ka ọ bụrụ uru ọ bụla. ma na-aga n'ihu ruo ogologo oge na-abịa."
"N'afọ a, ndị America na-eme ememe afọ 40 nke ọrụ na steeti Quintana Roo, na-arụ ọrụ site na Cancun, na taa na ọrụ ọhụrụ anyị na Chetumal, anyị ga-enye ohere ka ndị njem nleta na-achọ ịga leta isi obodo steeti, yana ebe ndị njem nleta. nke Bacalar na mpaghara ihe ochie dị iche iche gbara ya gburugburu," Vicky Uzal, onye isi azụmaahịa na American ụgbọ elu maka Mexico kwuru.
American ụgbọ elu ugbu a na-arụ ọrụ ụgbọ elu 750 kwa izu na njem 28 na mba ahụ, gụnyere ebe abụọ na Quintana Roo: Chetumal (CTM) na Cancun (CUN).